Zello mashandiro - Network maRadio
musha / Zello kushanda
Category: Zello kushanda
Makore apfuura, pandakatanga kuteerera mabhendi eAmateur, mashandiro aiita aive akanaka.
Kufona kwakapihwa zvakajeka, tsananguro dzakapihwa kumagumo kwekutaurirana nezvezvinangwa zveanodana, (kunyangwe ichiri kuongorora, kuvhara pasi, kuchinja frequency kana chero). Ivo vaibatsira "zvinongedzo" kune izvo zvaiitika zvinotevera mukutaurirana uye zvakanyanya kunaka kune vateereri seni.
Zvisinei, kwaigara kune ma "maverick" mashoma. Kazhinji vanhu ava vaigara vachidzokorora uye vachizvishandisa ivo vega, zvimwe zvinangwa "zvisina musoro".
Zvaive zvakajairika kunzwa mimhanzi ichirira, mazwi asinganzwisisike e "squeaky" uye dzimwe nguva mutauro unosemesa. Yakanga isiri iyo mhando yechinhu iwe yaungade kuti vana vako kana vazukuru vanzwe. Izvo hazvina kuita zvakawanda kushambadza iyo hobby futi!
Sei? Sei? Sei?
Tinogona kufungidzira nekusingaperi nezve zvinangwa zvevakadaro uye, chokwadi, panogona kutove nenyaya dzepfungwa dzakabatanidzwa mumusanganiswa zvakare.
Asi chokwadi chiripo ndechekuti Amateur Bands anga asiri (uye ndinotya ini ndinoti, nanhasi, haasati ari) nzvimbo yaungarega vechidiki vachingotenderera vakasununguka.
Isu tinochema kushomeka kwezviitiko pamabhendi eAmateur (kunze kwemakwikwi, asi ichocho chakanyanya chidzidzo che "Marmite" chandinodzivirira izvozvi) asi zviri, kune imwe nhanho, kubva mumaoko edu.
Hunhu hwehunhu hwatisingade kunzwa kuti hwapararira, zvinosuwisa kuti - uye zvinoita sekunge zvishoma zvatinogona kuita nezvazvo.
Kunyangwe vari ivo "vane mukurumbira" vanogara mu14MHz kana mapenzi emuno pamamita maviri, masimba edu ekupa marezinesi anoita seasina simba, kana asingakwanise, kana pamwe vasina nguva nezviwanikwa, kuti vagare mapurisa edu zvakanaka.
Nguva yaive yekuti zvaisazotora kutsauka zvakanyanya kunze kwemitemo yelayisense yako yaungatarisira kushanya nekukurumidza uye chaiko kubva kuMahofisi kubva kuGPO (kuUK) - marezinesi mazhinji anga ari munjodzi yekudzoserwa uye michina mizhinji yakatorwa.
Kwete zvimwe zvinoratidzika. Tingave ne "yemahara" rezinesi mune zvemari mari, asi izvo zvinouya zvishoma kutaura nezve maitirwo edu eAmateur anotongwa.
Pinda Dhijitari Tekinoroji
Mu 21st Century zvakadaro, isu tine tekinoroji tekinoroji iyo inotibvumidza isu kudzora "edu epasirese epasi" zvakanyanya zvakanyanya.
Uye ichi ndicho chimwe chikamu cheNetiweki maRadio ayo andinoda kutora pfungwa dzako nhasi.
Zello ndiyo inofarirwa PTT Anwendung anoshandiswa nemidziyo iyi - pane zvakawanda zvikonzero zvakanaka nei, asi pakati pazvo kugona kuchengetedza nzira iyo vanhu vanoiwana, mukutarisa.
Yakavakirwa Zello zvidzoreso kubatsira varongi vechiteshi uye "mamoderator" chengetedza kona yako yenyika yedhijitari ichimhanya zvakanaka.
Semuenzaniso, ngatiti iwe unogadzira chiteshi chekwako redhiyo kirabhu. Iwe unogona password kuichengetedza seyekutanga "mutsetse wekudzivirira" - chete nhengo dzako ndidzo dzinozoziva password uye ivo chete vanogona kuwana iyo. Parizvino, zvakanaka!
Ipapo iwe unogona kusarudza kuti chero nhengo nyowani, uchinge waisa iyo chaiyo password, inoda "kuvimbwa". Izvi zvinoreva kuti munhu wese anofanirwa kumirira kutaura kwemutungamiriri kuti avabvumire kuzara kwakazara kuchiteshi icho.
Asi hazvisi izvo chete!
Kana uchinge wavimbwa, unogona "kunyarara" (hapana kodzero dzekutapurirana - teerera chete dzinobvumidzwa), kuvharirwa (kwenguva ipi neipi yenguva) kana kutobviswa zvishoma!
Uri kuona here kwandiri kuenda neichi?
Dai izvi zvaive zvichikwanisika paHam Bhendi uye vanodzokorora munguva yakapfuura, vazhinji varombo vanoshanda uye hunhu vangadai vasina kusvika.
Asi izvo hazvisi nyore kwazvo mune imwe nyika yeanalogue. Munyika yedhijitari hazvo, zviri nyore kuitisa!
Rega ndikupe mumwe muenzaniso - iwo "Network Radios" Zello chiteshi ari kuratidza kufarirwa kwazvo panguva ino, kunyanya kuno kuUK. Chokwadi ivo vari kukura zvinoita kunge zuva!
Kutenda kune rakazvitsaurira boka revatungamiriri (iro zvakare rinoratidzika kunge riri kukura nezuva, nenzira!) Vatsva havarerukirwe "vakabvunzurudzwa" nezve kwavo kufarira kufarira mune yakawanda-Ham based chiteshi.
Nhengo iyi musanganiswa wevamateurs vane marezinesi uye redhiyo isina kupihwa marezenisi (kana kunyange "PTT") vanofarira, asi pane mitemo yakasimba pamusoro pehunhu, hunhu netarisiro.
Kamwe kana kaviri, vanhu vakadarika mucherechedzo uye ivo vakangobviswa munzira, vakanyeverwa uye dzimwe nguva kupihwa mukana wechipiri wekuvandudza hunhu hwavo. (Dzimwe nguva hazvidarowo, zvinoenderana nekukomba kwezvakatora nzvimbo…)
Nekuti Zello anokwanisa kurekodha zvese zvakapfuura (kana iwe uchizviudza!), Zviri nyore kuti mamoderita vateerere kune zvakanyatsotaurwa uye voshandisa icho sosi yekutanga yeuchapupu mumakakatanwa.
Mune mamwe mazwi, pane zvishoma zvinodikanwa kune humbowo hwemamiriro ezvinhu hwakavakirwa pane izvo mumwe munhu kufunga mumwe munhu akataura kana kureva. Kunyangwe kana ivo ma moderator vakapotsa iyo nguva inokanganisa ivo pachavo, vanogona kungoitsiva zvakare, sekunge yaive yekurarama!
Mufaro kune iyo (Dhijitari) Nyika
Izvi zvobva zvave zvimwe zve "zvinofadza" zvine mwero - iwo "mafaro" epasi redhijitari.
Kamwe zvakare, uye ini ndinokumbira ruregerero nekuramba ndichifunga nezve izvi, asi tekinoroji yatikanda isu conundrum. Kana tikaramba tichiedza kurarama chete mune imwe nyika yakafanana, mufaro wekudzora haugone kuwanikwa kwatiri. Nekudaro, kana isu tichigamuchira izvo zvitsva digital technology inogona kutiitira, tinogona kunatsiridza mugove wedu zvakanyanya.
Hakusi kuwedzera-kuwedzeredza kuratidza kuti tinogona kuva, mune ino nyowani yedigital world, mapurisa edu pachedu uye vedu pachedu mvumo yekupa marezinesi - kutaura zvazviri, isu tiri kutozviita!
Zvichida izwi rekupedzisira rinofanira kuenda kunhengo yeboka reNetwork Radios, iyo yakatumira iro chete svondo rino paFacebook Boka rakanamatira kumatanho, anotevera…
"Ndiri kungoda kutaura yekutenda kune ese ma mods uye vashandisi vandinonzwa zuva rega rega rekugadzira nekuchengetedza zvakabatikana, zvinonakidza, zvakanyanya tech / redhiyo centric nzvimbo ini ndinogona kupedzisira ndapinda mukati ndoteerera zvakare mumota uye kumba kana mhuri ndezve.
Mudiki wangu (9) ari muwairesi. Ane yake yega PMR radio (yakagadzirirwa neyakavanzika saka anongondinzwa chete), anoshandisa Zello pedu pachedu chiteshi uye anoda kutora hwaro bvunzo!
Tiri 'kunze' uye tinotora mawairesi nesu kwese kwatinoenda, asi matauriro emuno akapoterera pano akashata nemutauro wakajeka, padhuze-ne-iyo-knuckle innuendo / smut uye zvematongerwo enyika zvakasvibiswa nehusarura izvo zvandisisina kunzwa chivimbo chekubatidza FT-70, kunze kwekunge panguva yemangwanani chikoro chinomhanya kana chave chafa zvakadaro.
Ini ndaisa pamwechete hotspot ine nhare neDV4 Mini uye Raspberry Pi 3 kuti tune muCQ-UK iri nani zvisingaperi uye ichokwadi kumweya weredhiyo - ingori yakanyarara zvishoma dzimwe nguva. Ini ndinogona kazhinji kuita kufamba kwangu kwese ndisina kunzwa kamwe chete kufona.
Ndichiridzira Zello neNetwork maRadio mumota uye kumba, ndinoziva kuti tichazonzwa hurukuro yakanaka, yakachena uye ine ruremekedzo - zvinova ndizvo zvandaigara ndichitenda kuti ndiri Amateur Radio kiredhiti - uye ini 100% ndinoziva kuti ndiri kwete kuzonzwa zvinhu zvandinonzwa kubva kuCB yakawanda parizvino yakawedzera pamamita maviri kutenderedza pano nemutongo wavo mumwe pamusoro, kupokana, kupika nekutyisidzira kupa mumwe munhu 'kushanya'.
Ndakamirira T-320 yangu kuti isvike… FT-70 icha… icharamba ichiuya neni pandinobuda mumba, asi ndinotarisira kuti ichatanga rwendo muhombodo vana varipo.
Muchidimbu - cheers yekugadzira kumwe kunhu kunakidza kuve chikamu, mufaro kuteerera uye nenzvimbo yandinoziva kuti haizobvise zvachose mwanasikana wangu kubva kune yekuzvivaraidza, asi inomukurudzira kuti aende kunotora Foundation (License ).
Kufema kwemhepo yakachena ndekwechokwadi uye kurefu ngazvipfuurire. ”
Zvakanaka zvataurwa, Changamire! Nguva yakareba isu zvose ramba uchinakidzwa ne "Mufaro weMwero"!